China Amadoda imvana / iigusha suede yesikhumba uboya uludwe iiglavu zasebusika yoMvelisi kunye noMthengisi Umlandeli
Amadoda imvana / iigusha i-suede yesikhumba eboya begilavu ​​ebusika
Yenziwe ngesikhumba semvu yase-Itiyopiya ngasemva kunye nesundu se-deerskin, i-Deerskin yomelele kwaye yomelele, ingena kakuhle emoyeni, iyakwazi ukuphefumla ngezandla zakho. Ukudityaniswa kwezi zimbini, kunye neefashoni zakutshanje, ubugcisa obukhulu. indibaniselwano egqibeleleyo! Ayishushulanga kuphela izandla zakho, ipholile kakhulu!
● Inombolo yezobugcisa: EM-007
● Izinto eziphathekayo: i-100% yesikhumba se-suede yangempela kunye nesikhumba se-deers
Egqithileyo Amadoda amatakane egusha eboya begusha afakwe iiglavu zasebusika ngesandla
Okulandelayo: Amadoda imvana / iigusha zesikhumba iiglavu ezifakwe ngombala omnyama wendalo